Home » etn » Manam-pahaizana momba ny fanondranana olona an-tsokosoko no manamarika ny fiakaran'ny 44%
Ny isan'ny olona nanerana an'i Eropa fantatra fa iharan'ny fanondranana olona an-tsokosoko dia nitombo efa ho antsasaky ny taona 2015 sy 2018, raha ny vaovao farany tatitra isan-taona avy amin'ny Vondron'ny manam-pahaizana ao amin'ny Council of Europe momba ny hetsika fanoherana ny fanondranana olona an-tsokosoko
Raha ny angom-baovao nomen'ny tompon'andraikitra amin'ireo firenena 47 nofehezin'ny fivorian'ny fivorian'ny fivondronan'ny eropeana, 15,310 ny olona tra-boina tamin'ny taona 2018, raha 10,598 no traboina tamin'ny 2015.
"Ny firenena samy hafa dia manisa ireo iharan'ny fanondranana olona an-tsokosoko amin'ny fomba samihafa, fa ny angon-drakitra azo alaina kosa dia manondro fa nisy fitomboana be dia be tamin'ny isan'ny olona voarohirohy tamin'ity asa ratsy mahatsiravina ity," hoy ny filohan'ny GRETA, Davor Derenčinović.
“Ny toetra miafina amin'ny fanondranana olona an-tsokosoko sy ny zava-misy fa nahita olana tamin'ny fizotran'ny famantarana izahay any amin'ny firenena maro dia manondro fa ny tena isan'ny niharam-boina dia mety ho avo kokoa kokoa. Zava-dehibe ny hanamafisan'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny ny ezaka ataon'izy ireo hiatrehana ny fanondranana olona an-tsokosoko ary hanomezana fanampiana sy fanampiana izay zon'ireo niharam-boina ara-dalàna. ”
Ny tatitra androany dia manamarina ny fampiharana ny Fivoriamben'ny filankevitra any Eropa momba ny hetsika fanoherana ny fanondranana olona an-tsokosoko nataon'ny firenena voakasik'izany, 12 taona taorian'ny nidiran'ny fivoriambe, nifototra tamin'ny tatitra momba ny fihodinana faharoa nataon'ny GRETA.
Ny tatitra dia manasongadina ny famantarana ireo zaza niharan'ny fanondranana olona an-tsokosoko sy ny fepetra fanampiana omena ireo ankizy niharam-boina ho banga roa lehibe indrindra amin'ny fampiharana ny fivoriambe.
Ny fepetra fanampiana ny tra-boina amin'ny ankapobeny sy ny tsy fahombiazana amin'ny fanomezana vanim-potoana fanarenana sy fisaintsainana ireo niharam-boina dia voamarina ihany koa fa olana miely, ankoatry ny lesoka amin'ny famantarana ireo niharan'ny fanondranana olona an-tsokosoko ho an'ny karazana fanararaotana rehetra, ary ny sakana misakana ny tra-boina tsy hahazo onitra.
Mampiseho ihany koa ny tatitra fa mbola tsy mahafa-po ny sazy ataon'ireo mpanao trafika. Ny isan'ny fanenjehana sy ny fanamelohana dia mbola ambany ihany any amin'ny firenena maro, ary ny sazy mihatra indraindray tsy dia manelingelina loatra. Ankoatr'izay, mbola tsy fahita firy ny fakana ny fananan'ireo mpivarotra.
Na eo aza izany, GRETA dia nahita fanatsarana sasany tamin'ny fampiharana ny fivoriambe. Ohatra, nisy ny fitomboan'ny isan'ny firenena misy fehezan-dalàna manokana mamela ny tsy famaizana ireo niharam-boina noho ny asa tsy ara-dalàna natao vokatry ny fanondranana olona an-tsokosoko.
Nisy ihany koa ny fitomboan'ny isan'ny firenena izay manao heloka bevava amin'ny fampiasana serivisy ho an'ireo iharan'ny fanondranana olona izay mahalala fa nisy nanondrana azy ireo.
Ankoatry ny tatitra isan-taona dia namoaka a fanambarana amin'ny loza ateraky ny valanaretina coronavirus manoloana ny fanondranana olona an-tsokosoko.
Misarika ny saina amin'ny olana manokana niainan'ireo niharan'ny fanondranana olona an-tsokosoko ny fanambarana, anisan'izany ny mety tsy fananan-trano, ny fihenan'ny serivisy fanampiana omen'ny ONG mpanohitra ny fanondranana olona an-tsokosoko, ary ny loza mety hitrangan'ny tra-boina tsy hita maso.
Nampahatsiahy ny mpitondra ny adidy ara-dalàna sy ara-pitondran-tena ny GRETA mba tsy hanakantsakanana ny zon'olombelona sy ny fiarovana ireo mora tohina indrindra mandritra ny krizy, izay misy ireo iharan'ny fanondranana olona an-tsokosoko, ary mba hahazoana antoka fa vehivavy, lehilahy ary ankizy an'arivony maro no iharan'izany. ny fanondranana olona an-tsokosoko, na dia tsy hitan'ny masony intsony aza dia tsy ho diso adalana.
Nikatona ny magazay lehibe Barbados noho ny coronavirus COVID-19